Uboya → Impahla yokuthengisa • ukuhonjiswa kwekhompyuter kwe-P & M
Inyama sisambatho esithandwa kakhulu esihlala siphathwa njengento esisigxina umsebenzi okanye iimpahla zentengisooko kuvumela inkululeko enkulu yokuhamba kunejacket, ngelixa ukhusela iimpahla zabucala zabasebenzi.
Uboya yimveliso entle yokuhombisa ikhompyuter
Ezi zizibonelelo ezenza uboya buthandeke kakhulu kumashishini amaninzi. Zilukhetho oluhlala rhoqo lwabasebenzi, phakathi kwabanye, kwimveliso, kwimizi-mveliso nakwimizi mveliso yokwakha, kodwa nakwinjongo zabucala njengezambatho ezifanelekileyo nezishushu zeendidi zemisebenzi.
I-Adler 506 yoboya begusha obunokubakho kwayo nayiphi na into yokuhombisa
Ukhetho olubanzi loboya olufumaneka kuthi Ivenkile iza ipatiji yemibala ecebileyo.
Ndiyabulela oku, unokuhlengahlengisa ukhetho lwakho lokuchonga kunye nemibala yenkampani.
Ukongeza, kubuntu obuhlala buhleli kunye nobuhle, unokuyalela ukubulawa ngoboya isambatho sekhompyuter. Sithengisa abafazi, abesilisa, abantwana kunye neemodeli ze-unisex ezinobukhulu obahlukeneyo.
I-fleece njengokhetho oluqhelekileyo lweempahla zomsebenzi
Ijekethi yenyama ekhoyo kwiivenkile zethu zenziwa ziinkampani ezinje Reis yaye ILeber kunye neHollman.
Sinikezela uluhlu olubanzi lweemodeli ngokuxhomekeke kukhetho lomntu ngamnye-oluzaliswe ngokupheleleyo okanye luxhotyiswe kuphela nge-zipper emfutshane entanyeni, kunye okanye ngaphandle kwehood.
Uninzi lweemodeli zixhotywe nge-collar esebenzayo yokuma, ekhusela ngokubandayo, umzekelo xa usebenza ngaphandle okanye kwiifriji (zexesha elincinci, kwimeko yomsebenzi kwiimeko ezishushu zobushushu eziphantsi, sincoma isinxibo seevenkile ezibandayo kunye neeqhwa).
Uninzi lwee-sweatshy ezivela ekuqinisekisweni kwethu zineepokotshi ezinokusebenza kunye ne-zippers, ezongelwa ngokukodwa kwiimeko zomsebenzi owandisiweyo.
Siyabonelela Uboya begusha kwimibala yokulumkisa kunye nezinto ezibonakalayo, ezithandwa kakhulu phakathi kwabasebenzi bendlela, abakhi bezakhiwo, zonke iintlobo zeqonga kunye neenqanawa zeenqanawa. Ezinye zee sweatshi zinemitya esinqeni, ivumela kungekuphela ukulungelelanisa i-sweatshirt kwiindidi ezahlukeneyo zamanani, kodwa nakwiimeko zemozulu.
Iinkampani ezininzi ziyayibulela ubuntu obuthile kunye nobuqu, ngakumbi ukuba abaqeshwa badlala indima yokuqhakamshelana nonxibelelwano kunye nabathengi abanokubakho.
Indlela yokumakisha kunye nokuhonjiswa kwekhompyuter kwimpahla
Kungenxa yesi sizathu ukuba uboya obuprintweyo yinto ethandwayo yokunxiba kwiindidi ezahlukeneyo zeziganeko zangaphandle, iindawo ezimele abamele, iinkomfa kunye noqeqesho.
Ngelixa sisakha isibonelelo, asizange silibale malunga omncinci. Kwivenkile yethu uyakufumana uboya begusha ngemibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu. Sikwenza iimpahla zokuhombisa iimpahla kunye neelogo zezikolo kunye neeklabhu zazo.
Inyama kunye Iikipa Ezona mveliso zikhethiweyo zezona zinto zisebenzayo zobuqu zomsebenzi kunye neengubo zentengiso.
Sikumema wethu Ivenkileapho unokufumana uluhlu olupheleleyo lomsebenzi kunye noboya bezentengiso.
4f uboya begushauboya obukhangayoI-allegro uboya begushauboya begusha obububoiimpahla zoboyaUboyauboya begushakunye nobukhulu babafazi begushaUbambiswano lwamanenekazi lweshishiniUboya begusha babafazi ngehooduboya begusha babantwanaiibhatyi zoboya zamantombazanauboya begusha kubasebenziuboya benkampanimolo uboya begushauboya bamadodauboya begusha obuyindodauboya begusha besilisauboya begusha ngokwesicelouboya begushaumenzi woboyauboya begaziuboya obusebenzayouboya begusha u-Allegrouboya begusha bokubonisauboya bokucima umlilouboya begushauboya begushauboya obunelogouboya obunelogo yenkampaniuboya obushicilelweyouboya begusha buprintwe yinkampaniuboya obufikelelekayo
5 / 5 ( 18 iivoti )